पर्यटनकाे लागि चरा अवलाेकन परियाेजना तालिम - Nayabulanda.com
स्पर्श अतित ८ आश्विन २०७७, बिहीबार २०:०७ 860 पटक हेरिएको
उसैपनि इलाम पर्यटनकाे क्षेत्रमा सुपरिचित नाम हाे । इलामका युवाहरु पर्यटक भित्र्याउनकाे लागि नयाँ नयाँ कामहरुकाे खाेजि गरिरहन्छन् । झट्ट सुन्दा चरा अवलाेकन क्षेत्र नाैलाे लाग्छ इलाममेलीकाे लागि । तर इलाम नगरपालिकामै चरा अवलाेकन क्षेत्र बनाउन युवाहरु कसिएका छन् । इलाम नगरपालिका भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमध्ये सेतीदेवी इलाम बजार नजिकै रहेकाे पर्यटकीय क्षेत्र हाे । साेही ठाउँलाई युवाहरुले चरा अवलाेकन क्षेत्र बनाउने जमर्काेमा लागि परेका छन् ।
सुन्दर नगरी इलाम बजारदेखी करिव तीन किलाेमिटर टाढा पर्छ सेती देवी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र । बजारकाे पश्चिमी पुवाखाेलासँगै रहेकाे सेतीदेवी क्षेत्र जंगलकाे बीचमा रहेकाे छ । सुन्दर शान्त वातावरण त छ नै तर त्यहाँ चराचुरुङ्गीहरुले भने हरक्षण गीत गाएर साथ दिईरहन्छन् । तीनै ठाउँमा पर्यटन क्षेत्र बनाउन अघि बढेकाे अभियान्ता प्रशान्त गिरी बताउँछन् ।
पहिलाे चरणमा तीन दिवशीय पथ प्रदर्शक तालिम सम्पन्न भएकाे छ । सेतीदेवी चरा अवलाेकन क्षेत्र निर्माण परियाेजना अन्तर्गत साे कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे हाे । गत बुधबारदेखी बाह्रबस्ती इलाममा सञ्चालित साे कार्यक्रमकाे विहिबार सम्पन्न भएकाे हाे ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा पहिलाे दिन प्रशिक्षक सुदिप श्रेष्ठले “पथ प्रदर्शकहरुकाे नेतृत्व विकास” शीर्षकमा प्रशिक्षण दिएका थिए । दाेस्राे दिन प्रशिक्षक अर्जुन राईले “चरा अवलाेकन” शीर्षकमा र तेस्राे दिन “पर्यटकलाई कसरी गाईड गर्ने सुत्र” शीर्षकमा संजिव पाैडेलले प्रशिक्षण दिएका थिए । तालिमलाई इलाम नगरपालिका वडा नं. ६ काे आर्थिक सहयाेग गरेका छन् ।
समापन कार्यक्रममा बाेल्दै इलाम प्रमुख अतिथि समेत रहेका इलाम नगरपालिा वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष माधवप्रसाद भट्टराईले यस्ताे कार्यक्रम इलाममै पहिलाे भएकाे दावी गरेका छन् । आफू सम्बन्धित पर्यटकीय क्षेत्रकै बासिन्दा भएकाे र चरा अवलाेकन क्षेत्रकाे विकासका लागि लागिपर्ने वताए । साथै साेही क्षेत्रमा बन्जी जम्पकाे समेत सम्भावना रहेकाे र यसकाे लागि पनि युवाहरु लाग्न आग्रह गरेका छन् ।
समापन कार्यक्रम सेतिदेवी धार्मिक विकास समितिका अध्यक्ष चित्र प्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा भएको थियो । क्विन ईलाम पर्यटन प्रवर्दन समितिका अध्यक्ष प्रसान्त गिरी, वडा सदस्य सानू दास, धन बहादुर श्रेष्ठ लगायतकाे आतिथ्यता रहेकाे थियो ।
कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग र कार्यक्रम व्यवस्थापन पक्षमा पुर्याएको योग्दानको कदर गर्दै क्विन ईलाम र वडा नः६ को कार्यलयलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ । प्रशिक्षकहरूलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ भने प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।